Ifulethi eliwolintshi - elinengadi
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tika
Ifulethi lethu elinefenisha “liyikhaya elikude nasekhaya,” elisekupheleni komzila omncane obhekene negquma elibheke echibini elihle i-Fewa. Ilungele ngendlela emangalisayo—uhambo lwemizuzu engu-10 kuphela ukuya echibini lase-Pohkara, izitolo nezindawo zokudlela ezinikeza ukudla okuhle—kodwa kuthulile futhi kuyimfihlo. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yombhede othokomele, ikhishi liphelele futhi libukeka kahle, imvelo yomndeni, ingadi enhle enkulu. Indawo yami ilungele izithandani, izihambi ezizimele, izihambi zamabhizinisi, nemindeni.
Kusukela endaweni yethu, ungakwazi ukufinyelela imisebenzi eminingi i-Pohkara eyaziwa ngayo - ukuhamba ngezinyawo, ukugibela ibhayisikili, i-paragliding, njll. Kunezinhlobonhlobo zezitolo ongazihlola ezigxile ekuthuthukiseni imisebenzi yezandla yendawo ezizweni ezizungezile i-Pohkara, kanye nezindawo zokudlela ezinhle. ephikisana nendalo yokupheka kwamanye amakhishi angcono kakhulu ase-Asia naseYurophu.
Lapho udinga “isikhathi sokuphumula,” ungaphumuza indawo ebanzi, usebenze engadini, uzilimele imifino ekhethekile yemvelo, noma uvune eminye yemifino namakhambi akhula lapho bese uzenzela ukudla kwakho okukhethekile ekhishini lefulethi lethu. .
Ifulethi linekhishi elisebenza ngokugcwele elinesiqandisi ukuze kube lula kuwe nalapho udinga ukudla okukhethekile okuphekwe ekhaya. Kukhona i-24/7 high-speed wifi, amanzi ashisayo nogesi (kusukela ngo-2017, i-Pohkara ayisazwani nokunqamuka kukagesi). Kuhlinzekwa amalineni ombhede namathawula.
Ifulethi lethu lisendaweni ethule kakhulu, uhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukuya echibini lasePohkara (noma imizuzu emi-2 ngebhayisikili). Konke okuhle nge-Pohkara kufinyeleleka kalula efulethini lethu. Indawo okwakhelene nayo ingeyaseNepali yangempela, enikeza izivakashi ezihlala lapha ithuba lokufunda kabanzi mayelana naleli siko eliyingqayizivele nendawo yalo efudumele, enomoya wokungenisa izihambi.
Isakhiwo samafulethi siphethwe futhi sinakekelwa yithi. sihlala sitholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, noma sinikeze izincomo zokwenza ukuvakasha kwakho e-Pohkara kube yinto ekhumbulekayo.
UTika Ungumbungazi ovelele